Didy hahasoa antsika mandrakariva
"Ary Jehôvah nandidy antsika hanaraka ireo didy rehetra ireo sy hatahotra an'i Jehôvah Andriamanitsika, mba hahita soa mandrakariva isika sy ho velona tahaka ny amin'izao anio izao" - Deo. 6:24.
Ambaran'ny fivavahan-diso fa ny olombelona dia andriamanitra tsy nanota. Lazainy koa fa "ny sain'ny tsirairay no mitsara ny tenany". Mbola ambarany koa fa "ny tena fahalalana dia mametraka ny olombelona ho ambony noho izay mety ho lalàna", ary koa hoe: "ny fahotana natao dia tsy mahameloka". Ny antony dia satria "izay zavatra misy rehetra dia tsara avokoa" ary "Andriamanitra dia tsy manameloka na iza na iza". [...] Vokatr'izany dia maro ireo voatarika hino fa ny filàna no lalàna ambony indrindra, ny fanaranam-po no atao hoe fahafahana, ary tsy hampamoahana ny olombelona fa tompon'andraikitra amin'ny tenany ihany izy.
Manomboka amin'ny fiandohan'ny fiainana mihitsy no efa anehoana ny fampianarana toy izany. Koa eo anatrehan'izany, sy amin'izao fotoana izay mampahatanjaka indrindra ny filàna izao, kanefa koa maha-maika indrindra ny tokony hampiharana ny fifehezan-tena sy ny fahadiovana, dia inona no arofanina ho an'ny toetra tsara? (...) Mifanindran-dalana amin'izany dia ezahin'ny fanjakan'i baroa hofoanana ny lalàna rehetra, tsy ny lalàn'Andriamanitra ihany, fa ny an'ny olombelona koa (...)
Izany no hery miasa mangina atrehin'ny tanora ankehitriny. Ankehitriny no tokony hanorenany ny fototry ny toetrany, mba hahafahany mijoro manoloana izany tontolo misamboaravoara izany.. Tsy miova ny tena fototra sy ny tena môdely ho an'ny famolavolana ny toetra, ho an'ny taranaka rehetra sy ny toerana rehetra. Ny lalàn'Andriamanitra manao hoe "Tiava an'i Jehôvah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra, (...). Tiava ny namanao tahaka ny tenanao," izay foto-kevitra nasehon'ny Mpamonjy teo amin'ny toetrany sy ny fiainany, no hany fototra azo antoka sy taridalana azo itokiana (...).
Indro ny hany arofanina ho an'ny fahitsian-toetry ny tsirairay, ho an'ny fahadiovan'ny tokantrano, ho an'ny fiadanan'ny fiarahamonina, na ho an'ny fandrosoan'ny firenena. Eo anivon'ny fahakiviana sy ny loza ary ny fisarihana samihafa eo amin'ny fiainana, dia izay lazain'Andriamanitra no hany fitsipika azo antoka. — Ed, 227-229